Iikholeji zaseKentucky: I-SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa
Ukuqhathaniswa koLwesibini ngeCandelo le-SAT Admissions Data yeeKholeji zaseKentucky
Itheyibhile engezantsi inokukunceda ekukhokheni iikholeji zaseKentucky kunye neeyunivesiti eziphambili kumanqaku akho okuvavanya. Uya kubona ukuba imilinganiselo yokumkelwa kwamanye amazwe iyahluka kakhulu. Itafile ibonisa amanqaku aphakathi kwama-50% abafundi ababhaliswe. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujolise ekujoliseni kwelinye leekholeji zeKentucky.
Iikholeji ze-Kentucky ze-SAT izikolo (phakathi kwe-50%)
KwiYunivesithi yaseAsbury 510 630 490 610 - -
IYunivesithi yaseBellarmine 490 590 490 570 - -
Ikholeji yaseBerea 490 600 510 620 - -
College College 520 650 560 690 - -
IGeorgetown College 450 530 420 530 - -
Ikholeji yaseKentucky Wesleyan 430 580 440 560 - -
KwiTyunivesithi yaseTransylvania - - - - - -
Yunivesithi yaseKentucky 500 620 500 630 - -
Yunivesithi yaseLouisville - - - - - -
University of Western Kentucky 430 540 430 550 - -
Kuhle ukuba ugcine ingqalelo ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa avumelekileyo kwiiikholeji ezininzi zaseKentucky, ngokukodwa kwiikholeji eziphezulu zaseKentucky , nazo ziyafuna ukubona iirekodi zemfundo ezinamandla , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi yentshukumo ebalulekileyo kunye neencwadana ezilungileyo zinconywa .
Abanye abafundi abanamanani amanqaku, kodwa isicelo esingenamandla, asivumelekanga kwezi zikolo. Ngokufanayo, abanye abafundi abanamanani aphantsi, kodwa isicelo esiphezulu kakhulu (ekuqwalaseleni izinto ezichazwe ngasentla), angamkelwa. Ngoko, ukuba amanqaku akho aphantsi kunezo zidweliswe apha, ungalahlekelwa yiyo yonke ithemba. Khumbula ukuba i-25% yabafundi ababhalisile baye bahlawula ngaphantsi kwezigaba eziboniswe apha.
Ezinye izikolo azibonisi naziphi na izikolo. Oku kungenxa yokuba bayamkela kuphela izikolo ze-ACT (qiniseka ukujonga inguqu ye-ACT yale tafile), okanye ngenxa yokuba bavavanywa-ngokuzikhethela.
Oku kuthetha ukuba abafundi abafuneki ukuba bangenise amanqaku njengenxalenye yesicelo senkqubo, nangona, ukuba iimvavanyo zakho zilungile, kusengumzekelo omuhle ukuzithumela. Kwakhona, ezinye izikolo zokuzikhethela zifuna iimpawu zabafundi abafaka izicelo zoncedo lwezemali okanye i-scholarships. Qinisekisa ukujonga iimfuno zesikolo ngaphambi kokufaka isicelo.
Ukutyelela iprofayili yesikolo ngasinye esibhalwe apha, nqakraza nje kwigama layo kwitafile. Kulapho, uya kufumana ulwazi malunga nokuvakaliswa, ukuxhaswa ngemali, ukubhaliswa, amazinga okugqweswa, iimidlalo, iinkqubo ezidumile, nokunye okuninzi!
Izikolo ze-SAT zokwamkelwa kwiikholeji ze-Utah zonyaka
Uludwe lweKritique Checklist
Doch! ... kunye namanye amazwi angamaqhina aseJamani
I-10 Eyona Mveliso Yenambuzane Eenzuzo
Chord kunye neCord
I-Einstein Theory of Relativity
Iingcaphuno ezingalibalekiyo zikaWilliam Golding 'Nkosi yeeNtlanzi'
UWilliam C. Quantrill: Umkhosi okanye uMbulali?
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT
Abadlali beAfrican Best